Aung's Investment: အသက်ခြောက်ဆယ် = ၆၆%
Posted by Aung Myo Htet at 10/16/2009 04:34:00 PM
Aung Myo Htet October 16, 2009 7:13 PM
ပြောလို့မှ မဆုံးသေး ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ http://finance.yahoo.com/news/Social-Security-freeze-means-apf-1102942042.html?x=0&sec=topStories&pos=1&asset=&code=
NGUUNN October 17, 2009 2:25 AM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း နောက်အနှစ်သုံးဆယ် ဆိုတာကိုတွေးကြည့်မိတယ်။ ရှာလိုက် စားလိုက် ကုန်သွားလိုက် ကျန်တာလေးစုထားလိုက်နဲ့။ စုတယ်ဆိုတာကလည်း Mutual Fund လိုဟာမျိုး နောင်တချိန်ကျမှ ထိခွင့်ရမယ့်ဟာတွေ။ ကျနော်တို့ SG မှာဆို CPF ကလည်း saving တမျိုးပေါ့ဗျား။ တွေးကြည့်ရင်တော့လည်း အဲဒီ Saving တွေကခပ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အကိုပြောသလိုပဲဗျ၊ အဲဒီဟာတွေက အမြဲတမ်း Blue Sky ဖြစ်နေဖို့ဆိုတာ တယ်မလွယ်ပါဘူး။ လတ်တလော အခြေအနေတွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင် တနေ့တခြားသိသာလာနေတယ်လေး။ Retirement Plan ကောင်းကောင်းတော့ လုပ်ရအုံးမယ်။ Financial Freedom ကို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ရချင်တယ်ဗျား။ :)
*Thanksalot for your sharing.
nyimuyar October 17, 2009 3:51 AM
sell out everything and better go back to our home land at the age of 60+. :D
Aung Myo Htet October 17, 2009 9:52 AM
အသက်ငယ်တုန်း retireယူနိုင်အောင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမည်ကြီး ဘောလုံးသမားလို တွေးဖို့လိုတယ် - သူတို့ဟာ ကန်နိုင်တုန်း၊ နာမည်ကြီးတုံး လှိမ့်ရှာရပါတယ်။ Keyက သူတို့တော်သလို ကိုယ်ကလည်း Financialပိုင်းမှာ Educated ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် အောင်မြင်နိုင်တဲ့လိုင်းထဲမှာ ဒီလိုင်းပါတယ်။ Financial Educationကို စပြီးစောက်ချလုပ်ပါ၊ လက်တွေ့လည်း နည်းနည်းလိုမယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကို ဒီBlogကနေ ကူညီသွားဖို့ Planရှိပါတယ်။
Aung Myo Htet October 17, 2009 9:53 AM
ကိုညီမူရာ - ပထမဆုံးအပိုဒ်လေးကို ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဗျာ :)
whiteghostlay February 12, 2011 9:01 AM
အစ်ကိုပြောတာ ထောက်ခံပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကို လုံးဝနီးပါးလောက်မမျှော်လင့် ထားပါဘူး အခုတောင် budget deficit တွေနဲ့ လုံးချာလည်လိုက်နေတဲ့ အစိုးရပာာ ကျွန်တော်ပင်စင်ယူရင်ပိုက်ဆံပေးနိင်မယ် လို့အာမခံချက်မရှိပါဘူး Inflation ကလည်းရှိသေးတယ် ဒီတော့ ကိုယ့် ဘာသာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ ကလုံးဝ လိုအပ်ပါတယ်
khun zuuriya February 22, 2012 6:26 PM
Can you let me share your articles on my facebook wall?
Totally appreciate your life-changed knowledge distributions!!
I also just sign up the SGX trading account last week, and DBS Vicker brokerage firm!!
Thank you so much for your hard work brother!!!
Aung Myo Htet February 22, 2012 6:57 PM
Thanks for your kind words. By all means, you can share anything from my blog. Just mention the source. AMH